Amathiphu kubaluleke kakhulu ezilandelayo Njengoba i Freelancer Internet
About 75% abantu abasebenza nokwenza imali umsebenzi online njengoba freelancers abazimele, futhi bamsola telecommute kusuka ekhaya noma uthole izabelo ikhokhwe ngokusebenzisa ezinye inkampani inthanethi futhi namanje ukusebenza ngokusho ngendlela yabo siqu namakhono. The internet uye wenza kwaba nokwenzeka kakhulu imithwalo zemisebenzi ukuba outsourced abasebenzi ezishibhile kwamanye amazwe futhi ukuba ikhokhwe ngokusebenzisa ukukhokhelwa online processing ongakhetha. Izinkampani eziningi e-United States ukunciphisa overheads by Outsourcing kakhulu imisebenzi yabo kubasebenzi in India nakwamanye amazwe, futhi uthole ukukhokhela nabo ngokusebenzisa PayPal noma ezinye izinhlelo zokukhokha internet. Abesifazane abaningi in the US nazo fast beba bethu kanye namabhizinisi amaningi online ayakhuphuka ukuthi ehlosiwe at bethu ekhaya emsebenzini-at-nabafundi kanye nezinye freelancers ekhaya emsebenzini-at-. Ngakho Wena ngezokuvakasha uma usebenza kakhulu noma kancane njengoba ufisa futhi ngokuqondile ekhaya lakho nge computer yakho internet-exhunywe, futhi ukhokhelwe ngokusebenzisa ukukhokhelwa online izindlela amagama. Yini-ke ezinye zezici ebalulekile sandla empumelelweni yakho ikhaya emsebenzini-at-freelancer?
i. Beka amahora yakho siqu ikhiqize: Kumele baqonde ukuthi lapho usebenza nokunethezeka kwekhaya, kungase kube nengqondo ukusetha amahora ithele uma ngeke zaphazanyiswa izivakashi noma bahluleke by frivolities and TV. Kufanele usethe amahora athile ekhiqizayo ngaphandle lapho kumelwe ubhekane umsebenzi ukube ehhovisi evamile, futhi ungase utshele izivakashi zakho ukuba ahambele lezi amahora ngoba sakwazi uhola nizoqhubeka yakho.
ii. Umsebenzi esivumayo: Njengoba ekhaya emsebenzini-at-freelancer, Umsebenzi wakho ingase ibe isihloko lokubhala, VA, isikhungo call, transcriptionist and komfundisi online phakathi kwabanye. Udinga esivumayo lapho izingane zakho ngeke kube isicefe futhi lapho ungase ukugxila umsebenzi wakho ngaphandle eziseceleni amaphutha. Cabanga telecommuting njengoba umsizi virtual noma call centre kanye namakhasimende at the komunye umkhawulo line ukuzwa izingane zakho lokulila kanye phezulu TV, noma ngisho umsindo Motorcars. Khumbula ekhaya emsebenzini-at-freelancers eziningi uhola inkatho ngaphezu nyangazonke emholweni labaholako.
iii. Musa bakulume ngaphezu ungakwazi ukuhlafuna: Kungenzeka ukuba uzithwesa umthwalo onzima emsebenzini uma ungenawo unakekele mayelana imiqulu imisebenzi uthatha on. Ungase bahlule wena izinga umsebenzi wakho lingalimala ngoba lapho ukucindezeleka iqala ukuthatha toll kuwe. Cabanga kokuba amaphutha yokulubhala kanye nohlelo lolimi in web lokubhala okuqukethwe ngumsebenzi wakho nje ngoba ubuchopho yakho ukucisha phezu-zabasebenzi. Nakuba imisebenzi online ufike lulls futhi izimfuno okusezingeni, kufanele wamukela imisebenzi wena kuphela nesiqiniseko kokuqeda ngaphandle kokuvumela izinga bebhekene, futhi ungase eqinisweni cabanga Outsourcing uma yizinkulumo nomsebenzi kakhulu futhi efika ukuhlangabezana zokukhokha.
iv. Gcina akhawunti okuhle ukugcinwa: Uma umhlali ngaphakathi United States, ningakhohlwa ukuthi kufanele akhokhe intela IRS uma uhola ngaphezu $600 njengoba ngezokuvakasha nganoma imuphi unyaka, futhi kungase kudingeke futhi kunciphise overheads ezithile ezincane nakuba usebenza ekhaya. Ukugcina akhawunti ezinhle imihlomulo yenu, imithombo imisebenzi inthanethi, umsebenzi zokukhokha, nezinye amathebhu ezibalulekile olufanele umsebenzi wakho naniyobeka wena isikhundla lapho ungakwazi ukunquma isikhundla sakho sezimali kusukela nje shazi ezincwadini.
v. Imithombo Multiple of imirholo inthanethi: Uma nisebenza ngezokuvakasha online, wena ngokuvamile ngeke bakufanelekela izinzuzo zokuvikeleka accruable ukuba abasebenzi evamile inkampani. Awufaneleki for medical umshuwalense, 401izinzuzo k, nezinye izibonelelo umsebenzi phakathi kwabanye; Ngakho kufanele aqinisekise ukuthi ukuthola imithombo multiple of imirholo inthanethi ukuze uma kukhona amaklayenti eyodwa noma umthombo ngokungazelelwe bome, lingalimali yimuphi Olimele ungase uthole kanye nabanye ngesikhathi namanje ukonga for kusasa.
Iba ngowokuqala ukuphawula on "Amathiphu kubaluleke kakhulu ezilandelayo Njengoba i Freelancer Internet"